Man City Oo Bilowday Qorshe Cusub Oo Ay Ku Balaadhinayso Baaxadda Garoonkeeda
HomeWararka MaantaMan City Oo Bilowday Qorshe Cusub Oo Ay Ku Balaadhinayso Baaxadda Garoonkeeda
Kooxda Manchester City ayaa qorsheynaysa in ay balaadhiso garoonkeeda Etihad Studium marka la gaadho xagaaga soo socda, iyaga oo doonaya inay noqdaan kooxda labaad ee ugu garoonka balaadhan dalka England marka laga reebo kooxda ay aadka u xifaaltamaan ee Manchester United.
Madaxda kooxda Waddaniyiinta ayaa doonaya inay ku daraan qaadka garoonka 7,000 oo kursi, si loo gaadhsiiyo tiradda 61,000 oo kursi. Kooxda City ayaa kharash gareysay xilli ciyaareedkii £60million oo ginni, kuwaas oo lagu doonayey in lagu kordhiyo garoonka Etihad Studium.
Mulkiilaha carbeed ee kooxda Manchester City Sheikh Mansour ayaa ku kharash gareeyay kooxdiisa adduun lacageed oo dhan £200million oo ginni, si loo horumariyo garoomadda iyo Akademiyadda kooxdaas ay leedahay.
Manchester United ayaa ah kooxda ugu garoonka weyn horyaalka Premier League, sidaa darteedna waxay doonayaan inay noqdaan kooxda labaad ee ugu garoon qaadka weyn, xilli ay Chelsea iyo Liverpool ay qorsheynayaan inay kordhiyaan qaadka garoomadooda.